ပြန်လွတ်မလာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေကိုမဖြန့်ဖို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ – Cele Lover
ပြန်လွတ်မလာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေကိုမဖြန့်ဖို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ
ပြန်လွတ်မလာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူပိုင်တံခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေကို ဘုမသိဘမသိပဲအာချောင်မနေဖို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ
ယနေ့ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ အကျဉ်းသား (၂၀၀၀)ကျော်ခန့်ကို လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေက ထောင်ပေါက် ဝအရှေ့မှာ မနက်ကတည်းက သွားစောင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ မြစ်ကြီးနား၊ထားဝယ်၊လားရှိုးတို့မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ ဖမ်းဆီးခံပြည်သူတစ်ချို့ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယနေ့မှာလွတ်မြောက်လာမယ့် ပြည်သူတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အားလုံးက စောင့်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေထက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန် လွတ်မြောက်လာပြီဆိုပြီး သတင်းအမှားတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြန်ဖြေရှင်းထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးက “အပိုင်ကြီးကို ရေးတင်နေကြတာ မျက်စိနဲ့တပ်အပ် မြင်ခဲ့ကြလို့လား? မိသားစုထက်တောင် ပိုသိနေကြတာနော် စိတ်တိုနေရတဲ့အထဲ..ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အာမချောင်ကြပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်🙏😤” ဆိုပြီး သတင်းအမှားတွေမဖြန့်ကြဖို့ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။အစ်မဖြစ်သူရဲ့ရေးသားပြောပြချက်အရ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်က အခုချိန်အထိ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် မိသားစုဝင်တွေက ဆက်လက်စောင့်မျှော်ေ နရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ပိုင်တံခွန်အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက် ဆုတောင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ျပန္လြတ္မလာေသးတဲ့ ေမာင္ျဖစ္သူပိုင္တံခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမွားေတြကို ဘုမသိဘမသိပဲအာေခ်ာင္မေနဖို႔ေျပာလာတဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မ
ယေန႔ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေန အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန႔္ကို လႊတ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေတြထြက္ေပၚေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြက ေထာင္ေပါက္ ဝအေရွ႕မွာ မနက္ကတည္းက သြားေစာင့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ျမစ္ႀကီးနား၊ထားဝယ္၊လားရႈိးတို႔မွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေန ဖမ္းဆီးခံျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။ယေန႔မွာလြတ္ေျမာက္လာမယ့္ ျပည္သူေတြထဲမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း ပါဝင္လာမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အားလုံးက ေစာင့္စားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြထက္မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္တံခြန္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီဆိုၿပီး သတင္းအမွားေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ႕မိသားစုဝင္တစ္ဦးက ျပန္ေျဖရွင္းထားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ရဲ႕မိသားစုဝင္တစ္ဦးက “အပိုင္ႀကီးကို ေရးတင္ေနၾကတာ မ်က္စိနဲ႔တပ္အပ္ ျမင္ခဲ့ၾကလို႔လား? မိသားစုထက္ေတာင္
ပိုသိေနၾကတာေနာ္ စိတ္တိုေနရတဲ့အထဲ..ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ အာမေခ်ာင္ၾကပါနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္🙏😤” ဆိုၿပီး သတင္းအမွားေတြမျဖန႔္ၾကဖို႔ ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။အစ္မျဖစ္သူရဲ႕ေရးသားေျပာျပခ်က္အရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္က အခုခ်ိန္အထိ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိေသးတာေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေတြက ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေ နရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကလည္း ပိုင္တံခြန္အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article မေတိုးခိုင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကာ အိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီ
Next Article လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကို မဟုတ်တာတွေထပ်ပြောခိုင်းပြီ ဘဝသေအောင်ထပ်မလုပ်ဖို့ ပြောလာတဲ့ ရန်ရန်ချန်း